Maareeye iyo garab uu hogaaminayo oo iskugu jira xildhibaano, odayaal iyo siyaasyiin ay isku mowqif yihiin ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaabkii loo soo abaabulay qaar kamid ah xildhibaanada goboladaasi oo shalay sheegay in xukuumadda federaalka ay u wakiisheen inay soo magacaawdo xubnaha Somaliland ku meteli doona guddiyadaas.
Dec 23, 2020 · Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (GHDHF) isagoo tix gelinaya heshiiskii 17kii Sebteembar 2020 ee ay wada gaareen Golaha Wadatashiga Qaran oo ka koobnaa Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka. Heshiiskaas oo dhigayey hannaanka iyo xilliga ay doorashadu ka dhacayso dalka. Guddigu isagoo ka duulaya hawlaha iyo waajibaaka loo igmaday iyo marxaladdan xaasaasiga ah ee uu …
Guddiga xulayey Xildhibaanada oo ahaa agaasimayaal iyo shakhsiyaad ka tirsan shaqaalaha Dowladda ayaa shaqada u qabtay sidii ay Dowladda ku amartay oo ahaa inay Xildhibaanada noqdaan kuwa daacad u ah Dowladda oo ku shaqeenayo rabitaankeeda. ... warbixino dheeraad ah ayaa ka soo baxahaya in aqalka sare ee looga arimiyo dalka ethiopia ...
Jan 07, 2017 · Ugu dambeyntii, Musharixiinta ugu cad cad xilka madaxweynaha ayaa midkiiba wuxuu la kulmay xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka ee lagu soo doortay maamul goboleedyada, waxaana mid kastaa uu balanqaad u sameeyay xildhibaanada uu la kulmay.
Jun 24, 2018 · Dhageyso:-Xildhibaanada Galmudug Ayaa Dalbaday In La-Horkeeno Heshiiskii Ahlusunna Iyo Maamulkaas. Jun 24, 2018 - Comments off Qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxa ay ka dalbadeen madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug in ay si deg deg ah u horkeenaan heshiiskii dalka Jabuuti ay ku kala saxiixdeen Ahlusunna iyo Galmudug.
Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ee ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ayaa sheegay inaanu metelin Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.Qoraal ay soo saareen oo ay ku saxiixan yihiin 47 Xildhibaan ayay ku sheegeen inaanu Gudoomiyaha Aqalka Sare ku metelin hadalada iyo qoraaladiisa ka dhanka ah Guddiyada Doorashooyinka.Qoraalka ayay ku sheegeen in Dhismaha ...
Ergooyin ka yimid beelaha kala duwan ee Puntland oo gaaraya 1,887 Ergo ayaa doortay 37 Mudane oo ka mid noqonaya xubnaha Aqalka Hoose Dowladda Federaalka. 66-da Xildhibaan ee Baarlamaanka Puntland ayaa doortay 11 xubnood oo iyana Aqalka Sare Puntland u matali doona Dowladda Faderaalka Soomaaliya.Dec 29, 2020 · Gudida Doorashooyinka Somalia oo Dib u dhigay Doorashadii Xildhibaanada Aqalka Sare; Wasiiro Ka Tirsan Xukuumada JSL Oo Kormeer Ku Maray Goobaha Diwaangalinta G.Togdheer; Dawladda Maraykanka oo Wadda Qorshe Wada Hadal.Lagula Furayo Ururka Alshabaab; Gudoomiye Cirro Oo Kormeeray Caynaba, Oog, Qorilugud Iyo Deegano Kale
Nov 02, 2020 · Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa sheegay in sidaas darteed, uu isaga soo magacaabi doono labada xubnood ee gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashada heer federal, labada xubnood ee guddiga xalinta khilaafaadka, iyo sideedda xubnood ee guddiga doorashada heer gobol ee gobollada waqooyi. Hoos ka aqriso qoraalka kasoo baxay Madasha. Isha: Voa
Baarlamaanka Federaalka, waa mid ah Golaha sharci dajinta oo ukala baxa Aqalka sare iyo Aqalka hoose waana kuwaan Liiska Xubnaha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ee lasoo ban dhigay 17 agoosto 2012. Aqalka sare. Waxa 54 Matalaya Doowlad goboleeyada wali ilaa iyo ahdda lama dhisin. Aqalka hoose. Waa 275 xildhibaan oo matalaya shacabka Cod ...
Xildhibaanada Aqalka sare ee Soomaliya ayaa fadhigooda maanta kaga doodi Doona xeerkii maalin ka hor ay meelmariyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka Somalia ee Dalka lagaga mabnuucaayay shirkada DP WORLD Xildhibaannada Golaha Shacabka Somalia ayaa sharci daro ku Sheegay heshiisyadii ay shirkadda DP World la gashay Somaliland. iyagoo guud ahaan ka mamnuucay Dalka.
Jadwalkii doorashada Ee Golaha Aqalka Sare Oo fashilmay + Sababta Waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalkii doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ee horey loo soo saaray, kadibkii heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe, dowlad goboleedyada & gobolka Banaadir.
Xubnaha Aqalka sae ee maanta lagu doortay Magaalada Jowhar waxaa ku jira Muuse Suudi Yalaxoow oo horey Xiildhibaan iyo Wasiir uga soo noqday Dowladihii KMG ahaa, Muuse ayaa sidoo kale kamid ahaa Hogaamiyaashii Hubeesnaa ee Muqdisho xili maamulayay. Halkan ka Aqriso Magacyada iyo Qabiilada 8-da xubnood ee Hirshabelle ku matalaya Aqalka sare
Kulanka ay qorsheynayaan sanatarada golaha aqalka sare ayaa waxa uu yahay mid ay su’aalo ay ku weydinayaan Reysul Wasaare Xasan Cali Kheyre. Waxa la filaya in xildhibaanada aqalka sare madaama ay matalaan maamul gobaleedyada ay wax ka weydiyaan Reysul Wasaare Kheyre qilaafka xoogan ee ka dhaxeeya dowladda dhaxe iyo maamul goboleedyadda.
6.Golaha Shacabka iyo Guddiyadiisa waxay xaq u leeyihiin in qaar ka mid ah fadhiyadooda ku qabsan karaan meel ka baxsan xaruntiisa, haddii ay duruuf kallifto, saasna ay go’aansadaan. 7, Muddada Golaha waa 4 (afar sano) oo laga bilaabayo Maalinta la dhaariyay Xildhibaanada ugu horeeya ee ka tirsan Golaha Shacabka (20.08.2012).
Dhismaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabo ku dhow, iyadoo beelaha Soomaaliyeed iska dhex arkayaan Aqalkan oo ku cusub dalka. Muuqaalka hore waxaa ka muuqda inay Beesha Shanaad ku dulman tahay Aqalkan oo 1 xubin oo kaliya ay ka heshay, iyo Beesha Daarood oo ugu tiro badan xubnaha ay ka heshay Aqalkaasi.
Jun 27, 2020 · Xidlibaanada oo la magac baxay Kutlada sharci dhawr ayaa tilmaamay in haddii lagu daro kuraas Aqalka Sare, iyadoo aan loo marin habraaca ku xusan Dastuurka, gaar ahaan qodobbada 132-aad, 133-aad, 134-aad iyo 79-aad, in kordhintaasi baal-marsan tahay Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayna noqonayso wax aan sharci ahayn.
Jul 08, 2015 · Waxay kaloo tusayaan heerka sare ee Sayidku murtida iyo suugaanta Soomaalida ka joogay iyo sida uu suugaanta ugu xeel dheeraa. Diiwaankan waxaa Guddiga Af Soomaaliga u soo gudbiyey Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare iyo Akadeemiyada Dhaqanka si ay isha u mariyaan, waxay u la ekaataba uga soo yiraahdaan.
Oct 15, 2018 · Ugu danbeyntii,Guddoomiyaha Golaha Aalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa sheegay inuu furan yahay Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Golaha Aqalka sare,isagoona hoosta ka xariiqay iney horyaalaan xubnaha Aqalka sare ajandayaal dhowr ah, sida sharciyo ay horay u soo meel mariyeen Golaha Wasiirada iyo howlo kale oo muhiim ah. Akhriso:- Magacyada iyo qabiilada xildhibaanada cusub ee Jubbaland. August 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal , Wararka Maanta 0 Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka iyo Xuduudaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa caawa shaaciyay liiska xildhibaannada cusub ee Baarlamanka Jubaland.
Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulankiisa 27aad ee kalfadhiga 1aad ku yeeshay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho ayaa iska dhex xulay guddiyada joogtada ah ee golaha. Guddiga La socodka Dib-u eegista, Dhaqangalinta Dastuurka iyo arimaha Federaalka. Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.Dec 23, 2020 · Guddigu isagoo tix raacaya qodobada heshiiska 17 Sebteembar 2020, wajibaadkiisa shaqo ee uu Golaha Wadatashiga Qaran siiyayna gudanaya si ay dalku uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, wuxuu maanta oo ay tariikhdu tahay 23ka Diseembar 2020 shaacinayaa taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ay dhacayaan.
Dec 01, 2020 · XOG: Xubno laga reebay tartanka aqalka sare oo dabada ka riixaya mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha barlamaanka Puntland. December 1, 2020 Xuseen 1 Puntlandtimes (Garoowe)- Muranka u dhexeeya barlamaanka Puntland ayaa sababay inay maalintii labaad baaqdaan kulamadii barlamaanka, inkastoo ay socdaan dedaalo lagu xallinayo khilaafka ka dhex taagan.
Dec 30, 2020 · Madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni ayaa Xalay kulan gaar ah la qaatay guddoomiyaha golaha Aqalka sare Cabdi Xaashi C/llaahi oo
Mar 13, 2020 · Xildhibaanada ayaa walaac ka muujiyay geedi-socodka siyaasadeed iyo habdhaqanka Dr Abiy Axmad, iyagoo xusay in ay shaki wayn ka qabaan in xukuumaddu dhab ka tahay in ay isbadal dhab ah keento. Waxaa sidoo kale Gudigu uu dhagaystay warbixin qotodheer oo ku saabsan dawlad degaanka Soomaalida.
Wasiiru dowlayaasha cusub iyo qabiilada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Golaha Golaha Aqalka sare. Kulanka oo uu shirguddoominayay Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa warbixin looga dhageystay Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Federaalka dalka.
DAAWO-Khudbaddii Madaxweyne Denni Ka Horjeediyey Xildhibaanada Aqalka Sare. News / By Kulmiye Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa warbixin ka horjeediyay kulanka Golaha Joogtada ah ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Sep 19, 2018 · 150 Xildhibaan ayaa kulanka soo xaadiray, waxaana xildhibaanada ay soo bandhigeen talooyinkooda ku saabsan arrimaha amniga. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in talooyinkii ay soo gudbiyeen Xildhibaanada loo gudbinayo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ee Golaha Shacabka.
Ergooyin ka yimid beelaha kala duwan ee Puntland oo gaaraya 1,887 Ergo ayaa doortay 37 Mudane oo ka mid noqonaya xubnaha Aqalka Hoose Dowladda Federaalka. 66-da Xildhibaan ee Baarlamaanka Puntland ayaa doortay 11 xubnood oo iyana Aqalka Sare Puntland u matali doona Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
Oct 15, 2018 · Ugu danbeyntii,Guddoomiyaha Golaha Aalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa sheegay inuu furan yahay Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Golaha Aqalka sare,isagoona hoosta ka xariiqay iney horyaalaan xubnaha Aqalka sare ajandayaal dhowr ah, sida sharciyo ay horay u soo meel mariyeen Golaha Wasiirada iyo howlo kale oo muhiim ah.
Illaa iyo hadda ma jirto tallaab loo qaaday dhaqan-gelinta jadwalkaasi oo lagu caddeeyey in doorashada aqalka sare ay dhaceyso 1- da illaa 10-ka bisha December. Sababta ayaa waxaa lala xiriirinayaa khilaafka ka taagan dhismaha guddiyadda doorashooyinka dalka oo ay walaac ka muujiyeen hoggaamiyeyaasha mucaaradka.
AKHRISO-Qaabka ay qabiilada Soomaalidu u qaybsadeen xubnaha aqalka sare. Oktoobar 29, 2016 1:07 b 0 Muqdisho, Oct 29 2016–Dhismaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabo ku dhow, iyadoo beelaha Soomaaliyeed iska dhex arkayaan Aqalkan oo ku cusub dalka.
Waxaa soo xaadiray 31 senator, Gudoomiyaha Guddiga Garsoorka, Arimaha Diinta iyo Awqaafta, Xuquuqul Insaanka, Haweenka Iyo Caruurta, Zamzam Ibraahim Cali ayaa ka hor aqrisay sanatarada Golaha Aqalka Sare, iyadoo dul istaagtay talooyinkii lagu daray akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad. AKHRISO-Qaabka ay qabiilada Soomaalidu u qaybsadeen xubnaha aqalka sare. Oktoobar 29, 2016 1:07 b 0 Muqdisho, Oct 29 2016–Dhismaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabo ku dhow, iyadoo beelaha Soomaaliyeed iska dhex arkayaan Aqalkan oo ku cusub dalka.
Liiska xildhibaanada soomaaliya iyo qabiilada. Liiska xildhibaanada soomaaliya iyo qabiilada. Share: ...
Golaha Aqalka Sare BFS ayaa ku yeeshay xarunta Aqalka Sare Kalfadhiga 5aad kulankiisa 3aad 18-04-2019 Wafdi Labada Gole ee BFS oo uu hogaaminaayo Guddoomiyaha Aqalka…
Dec 29, 2020 · Gudida Doorashooyinka Somalia oo Dib u dhigay Doorashadii Xildhibaanada Aqalka Sare; Wasiiro Ka Tirsan Xukuumada JSL Oo Kormeer Ku Maray Goobaha Diwaangalinta G.Togdheer; Dawladda Maraykanka oo Wadda Qorshe Wada Hadal.Lagula Furayo Ururka Alshabaab; Gudoomiye Cirro Oo Kormeeray Caynaba, Oog, Qorilugud Iyo Deegano Kale
Magacyada & Qabiilada ay ka soo jeedaan Xildhibaanada Maamulka Koonfurgalbeed Viagra Gold no rx , lioresal reviews . Waxa inoo suurto gashay inan helno magacyada iyo qabiilada ay kasoo jeedaan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dhawaan lagu dhisay Magaalada Baydhabo. Doorashada xubnaha Aqalka hoose ayaa maanta ka dhacday xarunta Gaadiidka booliiska, waxaana amaanka xaruntaasi uu maanta ahaa mid si weyn loo adkeeyay. Xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray Xildhibanao horey uga mid ahaa Baarlamaankii hore iyo Xildhibaano ku cusub siyaasada.
Liiska Xildhibaanada la ansaxiyey maanta ayaa u qoraa sidatan: Ku: Issimada Dowlad Goboleedka Puntland. Ku Golaha Wakiilada Cusub ee Puntland. Ku: Maxkamada Sare ee DGPL. Ujeedo: Ansaxinta Golaha Wakiilada Puntland. Gudiga Ansaxinta Xubnaha Wakiiladu. Markuu arkey Lifaaqa Labaad ee Dastuurka Puntland ee mududa ku meel gaarka ah ee 28/10/2008
Nov 26, 2018 · Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi xaashi C/laahi ayaa 29/04/2018-ka, si rasmi ah ugu gudbiyay Hindise Sharciyeedkan guddiga Garsoorka ee Aqalka Sare. Xildhibaan Sam Sam Ibraahim Cali oo ah guddoomiyaha guddiga Garsoorka, arrimaha Diinta , Awqaafa, Xuquuqul Insaanka Haweenka iyo Caruurta ayaa ka sheekeysay marxaladaha uu soo maray sharcigan.
Dec 27, 2020 · Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka, ayada oo lagu
Palomino bronco 1251 sbSuzuki smg4 gauge manualBest smokeless muzzleloader 2018
Mar 15, 2018 · Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/laahi ayaa warbaahinta u sheegay in xeerkan uu ka soo gudbay Golaha Aqalka Sare wixii hada dambeeyana uu u gudbay Madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa Isniintii sharci daro ku tilmaamay dhammaan heshiisyadii ay shirkadda DP World ka sameysay Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in ... Baarlamaanka Federaalka, waa mid ah Golaha sharci dajinta oo ukala baxa Aqalka sare iyo Aqalka hoose waana kuwaan Liiska Xubnaha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ee lasoo ban dhigay 17 agoosto 2012. Aqalka sare. Waxa 54 Matalaya Doowlad goboleeyada wali ilaa iyo ahdda lama dhisin. Aqalka hoose. Waa 275 xildhibaan oo matalaya shacabka Cod ...Nov 02, 2020 · Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa sheegay in sidaas darteed, uu isaga soo magacaabi doono labada xubnood ee gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashada heer federal, labada xubnood ee guddiga xalinta khilaafaadka, iyo sideedda xubnood ee guddiga doorashada heer gobol ee gobollada waqooyi. Hoos ka aqriso qoraalka kasoo baxay Madasha. Isha: Voa Muqdisho (SNTV):-Ku-simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Alle ha u naxariistee Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo kooxo dhagar qaabayaal ah ku dileen magaalada Muqdisho. Dec 01, 2020 · XOG: Xubno laga reebay tartanka aqalka sare oo dabada ka riixaya mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha barlamaanka Puntland. December 1, 2020 Xuseen 1 Puntlandtimes (Garoowe)- Muranka u dhexeeya barlamaanka Puntland ayaa sababay inay maalintii labaad baaqdaan kulamadii barlamaanka, inkastoo ay socdaan dedaalo lagu xallinayo khilaafka ka dhex taagan. Oct 01, 2020 · Guddigu waxay qabanayaan waraaqdaha magacaabista musharaxiinta Aqalka Sare iyagoo ka hubinaya metelaada haweenka ee 30%. Maaraynta diiwangelinta Musharaxiinta: Guddigu waxa ay maareynayaan diiwangelinta musharaxiinta iyo dib u eegista diiwangelinta musharaxiinta Golaha Shacabka iyadoo laga hubinayo in ay buuxiyeen shuruudaha musharaxnimada ee ... Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulankiisa 27aad ee kalfadhiga 1aad ku yeeshay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho ayaa iska dhex xulay guddiyada joogtada ah ee golaha. Guddiga La socodka Dib-u eegista, Dhaqangalinta Dastuurka iyo arimaha Federaalka. Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulankiisa 27aad ee kalfadhiga 1aad ku yeeshay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho ayaa iska dhex xulay guddiyada joogtada ah ee golaha. Guddiga La socodka Dib-u eegista, Dhaqangalinta Dastuurka iyo arimaha Federaalka. Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.Ergooyin ka yimid beelaha kala duwan ee Puntland oo gaaraya 1,887 Ergo ayaa doortay 37 Mudane oo ka mid noqonaya xubnaha Aqalka Hoose Dowladda Federaalka. 66-da Xildhibaan ee Baarlamaanka Puntland ayaa doortay 11 xubnood oo iyana Aqalka Sare Puntland u matali doona Dowladda Faderaalka Soomaaliya. Hangoolnews:-iyada oo la filaayo in todobaadkan gudihiisa ay magaalada Muqdisho ka dhacaan Doorashada Xubnaha Somaliland u matali doona Xildhibaanada Aqalka Guurtida Somaliya iyo ka Golaha Wakiilada ayaa waxa la soo saaray liiska Xubnaha Aqalka Sare (Guurtida) tiradooda taasi oo ah 11 Xubnood oo Beelo beelo loo qaybsaday.May 23, 2018 · Muqdisho:kulan ay isugu yimaadeen xarunta Golaha Shacabka Xildhibaanada Golaha Ayaa Maanta looga Dooday wabixinta Akhrinta 2-aad ee Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidamada Qalabka Sida Iyo Howlgabka ay soo diyaariyeen Guddiga Difaaca Golaha Shacabka waxaana ka hor akhriyey warbixinta Guddoomiyaha Guddiga Difaaca Xildhibaan Xuseen Carab Ciise iyo Xoghayaha Guddiga Xildhibaan Sadiiq warfaa ... Nov 26, 2018 · Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi xaashi C/laahi ayaa 29/04/2018-ka, si rasmi ah ugu gudbiyay Hindise Sharciyeedkan guddiga Garsoorka ee Aqalka Sare. Xildhibaan Sam Sam Ibraahim Cali oo ah guddoomiyaha guddiga Garsoorka, arrimaha Diinta , Awqaafa, Xuquuqul Insaanka Haweenka iyo Caruurta ayaa ka sheekeysay marxaladaha uu soo maray sharcigan.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (Af Ingiriis : The Upper House of the Federal Parliament) waa aqal ka mid ah labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya (kaasoo la shaqeeya golaha shacabka. waxaa la aasaasay 2012 waloow aan xubno la soo xulay aysan jirin hadda awiidiisa waxaa la siiyay Madaxweynaha iyo madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya.
Jadwalkii doorashada Ee Golaha Aqalka Sare Oo fashilmay + Sababta Waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalkii doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ee horey loo soo saaray, kadibkii heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe, dowlad goboleedyada & gobolka Banaadir. Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (Af Ingiriis : The Upper House of the Federal Parliament) waa aqal ka mid ah labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya (kaasoo la shaqeeya golaha shacabka. waxaa la aasaasay 2012 waloow aan xubno la soo xulay aysan jirin hadda awiidiisa waxaa la siiyay Madaxweynaha iyo madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya. Oct 01, 2020 · Warqadan uu Gudoomiyaha Aqalka sare ku magacaabay guddiga doorashada gobolada Waqooyi ayaa loo kala direy Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’isul Wasaaraha iyo Madaxda dowlada goboleedyada. Qoraalkan ayuu guddoomiyaha Aqalka Sare ku xusay in aan lagala tashan xildhibaanada iyo senatarada gobolada waqooyi ka soo jeeda heshiiskii lagu gaaray magaalada ... Sep 25, 2020 · To start with, we’ll focus on the negative aspects of both types of monitors to make it easier for you to choose. The main downside of a 4K gaming monitor is the equipment and the cost required to run demanding video games at 4K with decent settings and frame rates, especially when it comes to high refresh rate 4K monitors, such as the LG 27GN950 4K 144Hz display. Akhriso:- Magacyada iyo qabiilada xildhibaanada cusub ee Jubbaland. August 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal , Wararka Maanta 0 Guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka iyo Xuduudaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa caawa shaaciyay liiska xildhibaannada cusub ee Baarlamanka Jubaland.Oct 24, 2016 · Maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntland, ayaa toddobaadkii hore soo xulay xubnaha ku meteli doona Aqalka Sare, wax xubin ahna kama aanay helin beelaha la heyb sooco. Xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegtay inay markii horeba fileysay cadaalad darrada lagula kacay ... Muqdisho (Caasimada Online) - Caasimada Online ayaa heshay dokumenti muujinaya habka beelaha Soomaalida loogu qeybiyey xildhibaannada aqalka hoose ee baarlamanka cusub ee Soomaaliya loo dhisayo sanadkan. Warqaddan ayaa ah heshiiska ay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku gaareen shirarkii ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.Apr 29, 2017 · Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulankiisa 27aad ee kalfadhiga 1aad ku yeeshay xarunta golaha ee magaalada Muqdisho ayaa iska dhex xulay guddiyada joogtada ah ee golaha. Guddiga La socodka Dib-u eegista, Dhaqangalinta Dastuurka iyo arimaha Federaalka. Sen. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole. Liiska Qabiilada Soomaalida